Shirkadaha Saliida Shaaha, Soosaarayaasha Bolise
Shaaha Tree Oil
[Magaca Latin] Melaleuca alternifolia
[Muuqaal] Dareere socda oo saafi ah, aan midab lahayn oo huruud cagaaran leh
[Adeegsiga iyo Faa'iidooyinka]
3. Quruxda iyo Cadar
Ku saabsan Saliida Shaaha
Shaaha Tree Oil waa uumiga dhexe ee uumiga laga soo daayay caleemaha iyo laamaha melaleuca alternifolia.
Shaaha Tree Oil waa saliid sifaysa oo leh saameyn daryeel maqaar oo aad u wanaagsan, taas oo saameyn weyn ku leh daryeelka maqaarka saliida iyo finanka. Waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta finanka, casaanka iyo bararka, finanka, madax-madoobaadka, maqaarka, iwm.
Shaaha Tree Oil wuxuu ku siin karaa gargaar murqo xanuun, xanuun, iyo murgacasho maxaa yeelay astaamaha kiimikada ee xoogan waxay u shaqeyn karaan sidii wakiilka ka hortagga bararka iyo sidoo kale dhiiri gelinta socodka dhiigga ee aag gaar ah, kaas oo dardar geliya howlaha bogsashada isla markaana kordhiya heerka unugyada cusub. iyo koritaanka gacanta.